Sawirro: Madaxweyne Xasan oo socod ku maray Muqdisho maalinta 15 May – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Madaxweyne Xasan oo socod ku maray Muqdisho maalinta 15 May
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u direy shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, sannadguuradii 72-aad ee ka soo wareegtay munaasabadda 15-ka May oo ah markii la aasaasey dhaqdhaqaaqii xornimadoonka ee ay horkacayeen dhalinyaro Soomaali ah.
Munaasabaddaasi awgeed ayaa Madaxweynaha oo ay wehliyaan kumanaan qof waxaa uu socod ku marey qaar ka mid ah waddooyinka magaalada Muqdisho, isagoo isla markaana ubax xusuus ah dhigey taalada SYL.
“Fariinta aan maanta idin wado waxay tahay in dhalinyarada ay waddankooda dhistaan. Ma jirto cid aan idinka ahayn oo waddankan uu u fadhiyo. Dadaalka aad hadda waddaan waa inaad sii labanlaabtaan” ayuu yiri Xasan Sheekh.
“Dhalinyaradii sameysey SYL 72 sanno ka hor waxay ahaayeen kuwo naftooda u hurey in Soomaaliya ay xorowdo, maqaam sarena ay gaarto. Sidaa darted waxaan idin kula dardaarmayaa idinkoo taas ka shidaal qaadanayaa inaad ku dhaqaaqdaan talaabo waddankan lagu hormarinayo” ayuu sidoo kale yiri Madaxweynaha.
Burundi: Afgembigii ciidamada oo dhicisoobay & 3 sarkaal oo la xiray